Nanivana ny vidin'ny kinova OnePlus 6 | Androidsis
Amin'ity herinandro ity dia mitombo ny isan'ny tafaporitsaka momba ny OnePlus 6. Tsy ho ela dia ho tonga eny an-tsena ny haavony vaovao amin'ny marika sinoa, na dia mbola tsy fantatsika aza ny daty nanombohany. Saingy, tao anatin'izay herinandro lasa izay dia fantatsika ny antsipiriany bebe kokoa, ao anatin'ny endriny, izay hanisy ny notch. Ankehitriny ny vidin'ny kinova telo izay ho tonga avy any amin'ny farany ambony dia voasivana.
Toy ny mahazatra, Ny OnePlus 6 dia hamely ny tsena amin'ny tsikombakomba RAM sy fitehirizana anatiny. Ka ny mpampiasa dia hanana safidy hisafidianana miaraka amin'ny fiononana feno. Ary efa fantatray ny vidin'izy ireo.
Amin'ny fiandohany, OnePlus dia marika nahasarika ny sain'ny olona ho mora vidy kokoa noho ny mpifaninana aminy. Isaky ny telefaona vaovao dia miakatra ny vidiny. Zavatra iray izay antenaina hitranga amin'ity taona ity miaraka amin'ny OnePlus 6, izay Voalaza fa io no lafo indrindra hatreto. Ny fiakaran'ny vidiny dia tena izy, na dia mbola mora voamarika noho ny ambin'ny ambaratonga ambony aza izy io.
Ireto ny vidiny izay navoaka isaky ny kinova amin'ny telefaona:
OnePlus 6 miaraka amin'ny fitehirizana 64GB: 3299 425 yuan (eo amin'ny XNUMX euro)
OnePlus 6 128GB: 3799 yuan (eo amin'ny 490 euro)
OnePlus 6 256GB vidiny: 4399 yuan (eo amin'ny 565 euro)
Ny zavatra azo antoka indrindra dia rehefa tonga any Espana ilay fitaovana dia somary avo kokoa ny vidin'ny kinova telo. Ireo no vidin'ny fanovana ny telefaona, fa amin'ny ankapobeny dia somary lafo kokoa izy ireo. Noho izany, ny kinova finday lafo indrindra mety manana vidiny 600 euro eo ho eo. Zavatra mifanojo amin'ny fivoahan'ny herinandro vitsivitsy lasa izay.
Mirongatra ny fanantenana ny telefaona OnePlus. Na dia mbola tsy nanambara ny daty fametrahana azy aza ny mpanamboatra sinoa. Matetika izy io dia atao amin'ny volana Jona, saingy manantena izahay fa hanana fanamafisana avy hatrany amin'ny orinasa tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Nanivana ny vidin'ny kinova telo an'ny OnePlus 6
Rehefa manomboka mirongatra toa an'i Xiaomi ny vidiny noho izy ireo any Espana dia ho very tsena ireo marika roa ireo. Soa fa misy safidy hafa.
Sivanina ny masontsivana voalohany an'ny Snapdragon 841
Ny sivana, daty famoahana ary ny vidin'ny Vivo Y71 dia voasivana